Dị ka ọnọdụ HR ọ bụla dị iche, ị na-echekarị: ebe ị ga-amalite, onye ị ga-akpọtụrụ, n'ime oge ole, akwụkwọ ndị ị ga-edejupụta, wdg. Gịnị ma ọ bụrụ na ajụjụ ndị a niile bụ naanị ihe ncheta ọjọọ?
Mụta ụkpụrụ, chekwaa ma mekwaa usoro gị
Ijikwa ndị ọrụ ACTIV na-enye gị echiche zuru ụwa ọnụ nke ọnọdụ ahụ iji mee ka ndụ gị dị mfe kwa ụbọchị: akwụkwọ akụkọ bara uru jikọtara ya na usoro mmekọrịta nke ngwaọrụ Lumio na-enye gị ohere imeghachi omume n'ụzọ kwesịrị ekwesị na ọnọdụ HR ọ bụla wee hazie usoro ndị metụtara ya. Ị na-enweta azịza ha ngwa ngwa n'ọnọdụ gị.
N'ikpeazụ, maka isiokwu njikwa ndị ọrụ ọ bụla, Jikwaa ndị ọrụ ACTIV na-enye ozi nchịkwa niile, na asụsụ doro anya, iji ghọta isiokwu ahụ nke ọma. Ihe ngwọta ahụ na-aga n'ihu, site na ịgbatị nkwado n'oge usoro mmejuputa ya na usoro Lumio mmekọrịta nke na-eburu n'uche nkọwapụta ọnọdụ (onye ọrụ echedoro ma ọ bụ na ọ bụghị, ụdị nkwekọrịta, ịka nká, ogo ụlọ ọrụ, wdg). N'ezie, mgbe achọrọ usoro iwu, a na-emepụta akwụkwọ ahaziri iche na akpaghị aka.
Ijikwa ndị ọrụ ACTIV na-enyekwa gị nkwekọrịta mkpokọta, yana n'ikpeazụ ohere nchekwa nke na-eme ka ozi ndị ọrụ yana usoro yana
HR Innovation 2021 - Nchịkwa ndị ọrụ na-arụ ọrụ: iwu gbasara ọrụ ike maka ọrụ HR dị mfe kwa ụbọchị July 10th, 2021Tranquillus
GỤỌ Ihe niile gbasara nkwekọrịta nkwekọrịta ndị ntorobịa (CEJ)
gara agaURSSAF: kedu ihe eji enyere mmadụ aka?
-esonụỌrịa ịhapụ: izu ike nke ọnọdụ mkpuchi agbatịro ruo June 1, 2021